I-china JHPRO JH-4350AK IModeli ENTSHA yokudilizwa kwesando esincinci se-1300W esinefektri ye-SDS MAX kunye nabenzi | Jiahao
I-JHPRO JH-4350AK IMODEL ENTSHA yokudilizwa kwesando esincinci 1300W ene-SDS MAX
Isando sokudiliza iJHPRO sisetyenziselwa ukubeka umbhobho, ukufakela oomatshini, unikezelo lwamanzi kunye neendawo zokuhambisa amanzi, ukuhonjiswa ngaphakathi, amazibuko kunye nolunye ulwakhiwo lobunjineli. Sigxile ekuveliseni izixhobo ezikumgangatho ophezulu ezinokuthenjwa ukuhambisa ukusebenza okuphezulu. Ke ukuba ujonga isando sokudiliza esinexabiso elinamandla okwenza imisebenzi yoxinzelelo njengokufaka iingcango ezityibilikayo zokuhlaziya indlu yakho yangasese, ke i-JH4350AK lukhetho oluhle kakhulu.
Esi sixhobo seengcali sokudiliza isando sokugqobhoza kunye nomsebenzi wokudiliza, ukungcangcazela okuphantsi ekusebenzeni kwaye akukho mthwalo. Ubungcali bokwenza umsebenzi, umatshini omtsha wobuchwephesha kumgangatho ophezulu, NgeeJoules ezingama-20 zamandla eempembelelo kunye neqondo lempembelelo ye4000bpm, uya kuba nakho ukubetha ngomsebenzi osindayo wekhonkrithi kunye neebhloko zokwakha ngaphandle kokophula ukubila.
I-JH4350AK ixhotyiswe nge-48 * 72 mm imoto yocingo lobhedu, amandla okwenene e-1300W, inokuhlangabezana neemfuno zomsebenzi onzima ophukileyo. Imoto egqunyiweyo kabini iphucula ukhuseleko. I-JHPRO ibanga lobungcali lesando sombane liphupha lomqhubi njengoko likhawuleza ngamandla aphezulu, likhululekile ukubamba. Isando siza kunye nomgangatho olungileyo we-chisel kunye ne-BMC.
Ukutshixa iqhosha lokusetyenziswa kwezicelo ezongeziweyo
Indawo yokubamba i-Ergonomic intuthuzelo ephezulu xa kusetwa kwiindawo ezixineneyo okanye kwiindawo ezahlukeneyo
I-1300 Watt 4000 BPM
Ubuninzi be-SDS Ukucaciswa Izixhobo
Ikaliwe amandla ombane: 1300W
Ixabiso lempembelelo: 4000Bpm
Impembelelo yamandla: 20J
Umnini wesixhobo: SDS MAX
Imoto: 48 * 72mm
Ubunzima bomatshini: 7kg
I-QTY / CTN: 2pc
Ibhokisi engaphakathi: Ibhokisi ye-BMC
Iphakheji yeCarton: 54 * 28.5 * 36 CM
I-NW / GW: 19 / 20KG I-SDS max point chisel: 1pc 18 * 350mm
I-SDS max hex chisel ethe tyaba: 1pc 18 * 350mm
Isikrufu sentloko yesocket: 1pc
Isitshixo seoyile: 1pc
Imbiza yegrisi: 1pc
Egqithileyo I-JHPRO JH-4350A yokuDiliza uMbane iHammer Breaker Breaker 1300W uJack Hammer
Okulandelayo: I-JHPRO JH-0841 Ukudiliza uMbane i-Hammer Breaker Breaker eyi-1050W iJack Hammer
I-1300w yokuNqanda i-Hammer
Umbane wamandla ombane we-Drill
I-Sds Max yombane